ဒီကစ္စဘယ်လိုရှင်းမှာလဲ ? | မျိုးမြန်မာ
Posted by myomyanmar on May 27, 2014
Posted in: ဘာသာရေး, အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.	Tagged: ဗုဒ္ဓ, မိုဟမ္မဒ်, အရိမေတ္တယျ, Mohammed.	Leaveacomment
နောက်ဆုံး ဗုဒ္ဓ အရိမေတ္တေယျ
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ” သုခမိန်၊ ကြည်ညိုဖွယ်ရာပုဂ္ဂိုလ် ” ဖြစ်တယ်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ပိရိနိဗ္ဗာန်စံချိန်မှာ သူ့ရဲ့ အရင်းနှီးဆုံးတပည့်ဖြစ်တဲ့ ညီတော် အာနန္ဒာကို ကြိုတင်မှားကြားခဲ့သည်။
“အို-အနန္ဒာ၊ ငါသည်ကား ဤလူ့ကမ္ဘာ၌ ပထမဆုံးသော ဗုဒ္ဓမဟုတ်သည်သာမက၊ နောက်ဆုံးလည်းမဟုတ်ပေ။ အချိန်ကျရောက်ပါက ဤကမ္ဘာ၌ အမှန်တရားနှင့် မေတ္တာတရားကို သွန်သင်ပေးမည့် ဗုဒ္ဓတစ်ပါးပေါ်ပေမည်။ သူ၏နေရာဌာန အဆင့်အတန်းသည်ကား သန့်စင်ပြီးမြင့်မြတ်ပေမည်။ သူ၏ နှလုံးသားသည်ကား သန့်ရှင်းစင်ကြယ်လှပေမည်။ သူသည် အသိပညာနှင့် ဥာဏ်ပညာကို ပိုင်ဆိုပေမည်။ သူသည် လူသားအားလုံးကို ဦးဆောင်၍ လမ်းပြပေမည်။ ငါအရှင် သွန်သင်သကဲ့သို့ သူသည်လည်း အမှန်တရားကို သွန်သင်ပေမည်။ သူသည် ကမ္ဘာလောကကြီးကို စစ်မှန်သည့် ဘ၀လမ်းစဉ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ချိန်တည်း၌ ပြီးပြည့်စုံစေမည်ဖြစ်သည်။ အိုအနန္ဒာ သူ၏ အမည်သည်ကား အရိမေတ္တယျဖြစ်ပေမည်။”
(Gospel of Buddha – By,Carus, page-217)
(၁) ဗုဒ္ဓသည် မြင့်မြတ်ပြီး ကြွယ်ဝသည့် မျိုးနွယ်စုမှ ပေါက်ဖွားလာခြင်း။
(၂) ဗုဒ္ဓ၌ သားရှိခြင်း
(၃) ဗုဒ္ဓ၌ ဇနီးတစ်ပါးနှင့်မိသားစုရှိပြီး၊ အုပ်ချုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်ခြင်း။
(၄) ဗုဒ္ဓသည် သူ၏ ပုံမှန်ဘ၀ကို ပြီးပြည့်စုံစွာကုန်ဆုံးစေခြင်း။
(Warren, Mohammad in the Buddhist Scriptures, page – 79)
(၅) ဗုဒ္ဓသည် မိမိ၏ အလုပ်ကိစ္စကို မိမိကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ခြင်း။
(The Dhamapada, S.B.E. Vol. X-Page-67)
(၆) ဗုဒ္ဓသည်ဟောပြောသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ ဟောပြောသူအဖြစ် သိရှိကြသည်။
The Tathagatas(Buddhas) are only preached (The Dhamapada – S.B.E, Vol.X Page-67)
(၇) ဗုဒ္ဓသည် သူ၏ သီးသန့်တရားကျင့်ခြင်းမှ နားသောအခါ၊ ဘုရားသခင်သည် သူ့ထံသို့ ကောင်းကင်တမန်၊ နတ်များနှင့် မီးနှင့်ဖန်ဆင်းခံတို့အား စေလွှတ်ခဲ့သည်။ (Saddharma-Pundrika, S.B.E Vol. Page-225)
(၈) ဗုဒ္ဓတိုင်းသည် လူသားထုအား ယခင်ဗုဒ္ဓနှင့်ပတ်သက်၍ သတိပေးနှိုးဆော်လေ့ရှိသည်။ ထိုအပြင် လူထုအား မကောင်းမှုပြု၍ သေကျေပျက်စီဆုံးရှုံးစေမည့် မိစ္ဆာမကောင်းဆိုးဝါး၏ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲခြင်းမှ သတိပေးလေ့ရှိသည်။ (Carus, Gospel of Buddha, page-254)
(၉) ဗုဒ္ဓ၏ နောက်လိုက်များသည် ပြီးပြည့်စုံမှုရရှိပြီး ။ ၎င်းတို့အား ပျက်စီးဆုံးရှုံးစေမှုဆီသို့ မဆွဲဆောင်နိုင်ပေ။
(The Dhamapada, S.B.E, Vol.X,page-67)
(၁၀) တစ်ချိန်တွင် ဗုဒ္ဓတစ်ပါးသာ ကမ္ဘာ၌ ပေါ်ထွန်းသည်။
(The Life and Teaching of Buddha, Anagarika Dhamapada, page-84)
(၁၁) ဗုဒ္ဓ၏ အဓိက၀ိသေသထူးမှာ ၎င်း၌ ဆရာသမားမရှိခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။ (Beal, Romantic History of Buddha . page 241)
အရိမေတ္တေယျ ဗုဒ္ဓ၏ ၀ိသေသထူးများ။
(၁) အရိမေတ္တယျဆိုသည်မှာ “အလွန်တရာ သနားကြင်နာခြင်း။
(Mohammad in the Buddah Scriptures, page-15)
(၂) နောက်ဆုံး အရိမေတ္တေယျဗုဒ္ဓသည် အထက်ဖော်ပြပါ ဗုဒ္ဓတစ်ပါး၏ ၀ိသေသလက္ခဏာများ အားလုံးပိုင်ဆိုင်လေသည်။
(၃) အရိမေတ္တေယျဗုဒ္ဓသည် ဗောဒီညောင်ပင်အောက်၌ အစည်းဝေပွဲတရားကျင်းပလေသည်။ (Taka Kasu, Page-213)
(၄) ညောင်ပင် နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပေသည်။ မြေကြီးနှင့်သက်ဆိုင်သော ဗောဓိညောင်ပင်နှင့် ကောင်းကင်နှင့်သက်ဆိုင်သော ဗောဓိညောင်ပင် တို့ဖြစ်ကြသည်။ ဗုဒ္ဓသည် ဗောဓိညောင်ပင်အောက်၌ ဥာဏ်တော်ကိုရရှိခဲ့သည်။ ကောင်းကင်နှင့်ဆိုင်သော ဗောဓီညောင်ပင်သည် အလွန်ကျယ်ပြန့်လှ၏ (Beal, Romantic History of Buddha, Page-237)ဥာဏ်တော်ရရှိပြီးနောက် ဗုဒ္ဓသည် ယင်းသစ်ပင်ကို စိုက်ကြည့်ခဲ့ပေသည်။
(၅) သာမန်လူသားများနှင့်ယှဉ်လျှင်၊ ဗုဒ္ဓ၏ လည်ပင်းနှင့်ပင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အရိုးများသည် အလွန်သန်မာ၏။ ထို့ကြောင့် လည်ပင်းကိုလှည့်ရာတွင်၊ သူ၏ တစ်ကိုယ်လုံးကိုပင်လှည့်ပတ်နိုင်ပေသည်။ (Dhamapada, S.B.E, Vol. X, page-60, အောက်ခြေမှတ်စု) ထို့ကြောင့် အရိမေတ္တေယျဗုဒ္ဓသည် ဤ ၀ိသေသထူးကို ရရှိပေမည်။
ဒီ ၀ိသေသ ထူးတွေကို ကြည့်ပြီး မိုဟမ္မဒ်ကြီးက အရိမေတ္တေရဖြစ်ပါသည်။ တဲ့ …
(၁) ဘုရားသခင်သည် တမန်တော် မုဟမ္မဒ် နှင့်ပတ်သက်၍ (၉၃း၈)မှာ မိန့်ဆိုထားတာကတော့.
ထို့အပြင်၊ ထိုအရှင်မြတ်သည် အသင့်အား ပစ္စည်းမဲ့ အဖြစ်၊ တွေ့ရှိခဲ့တော်မူခဲ့ရာ ၊ ဥစ္စပစ္စည်းကြွယ်ဝစေတော်မူခဲ့သည် ”
တမန်တော်အဖြစ် မကျော်ကြားခင် သူဟာ လုံလုံလောက်လောက်ကြွယ်ဝချမ်းသာအောင် ရှာဖွေစုဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ သူ့မှာမြင်းမြောက်များစွာရှိခဲ့တယ်။ သူစီးဖို့ ကျော်ကြားတဲ့ ကဆ်ဝါ ခေါ် ကုလားအုတ်မတစ်ကောင်ရှိခဲ့တယ်။ မက္ကာကနေ မဒီနာကို ရွေ့ပြောင်းတဲ့အခါ အဲဒီ ကုလားအုတ်မကို စီးနင်းခဲ့တယ်။ သူဆီမှာ နောက်ထပ် ကုလားအုတ် အကောင်းနှစ်ဆယ်လည်း ရှိခဲ့ပြီး၊ အဲဒီနို့ကို သူ့ကလေးတွေနဲ့ ဧည့်သည်တွေအတွက် အသုံးပြုခဲ့တယ်။ သူ့မှာ ဆိတ်မ ခုနှစ်ကောင်လည်းရှိခဲ့တယ်။ သူ့မှာ ကျွဲတစ်ကောင်မှ မရှိဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အရေးဗီးယားမှာ ကျွဲသတ္တ၀ါ မရှိဘူး။)
(Life of Mohammad., Sir. William Muir, page 545-546) သူ့မှာ စွန်ပလွန်ပင် ခုနှစ်ပင်ရှိခဲ့ပြီး အဲဒါကို သူလှူဒါန်းခဲ့တယ်။ (Ibid-page-547)သူဟာ မြေကွက်သုံးကွက်ပိုင်ခဲ့တယ်။ ရေတွင်းအနည်းငယ်ဟာ သူ့ရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာ ရှိခဲ့တယ်။ အရေးဗီးယားမှာ ရေတွင်းပိုင်ဆိုင်ခြင်းဟာ ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းရဲ့ လက္ခာဏာတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိထားရမှာဖြစ်တယ်။ သဲကန္တရဖြစ်တဲ့ အတွက် အရေဗီးယားမှာ ရေဟာ အလွန်တန်ဖိုးရှိလှပေတယ်။ (Ibid-page -547)
(၂) မုဟမ္မဒ်မှာ ဇနီး ၁၂ ပါးရှိခဲ့တယ်။ သမီးလေးယောက်နဲ့ သားသုံးယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ ဒီတော့ ဇနီးမယားနဲ့ သားသမီးရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓ နဲ့ ဆင်တူပေတယ် ။
(၃) မုဟမ္မဒ်ဟာ အုပ်ချုပ်သူ တစ်ဦးဖြစ်တယ်။ သူဟာ သူ့ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက်ထောင်ပေါင်းသောင်းပေါင်းများစွာကို ရှုံးနိမ့်စေခဲ့ပြီး၊ အရဗ်တစ်ခွင်လုံးမှာ အုပ်ချုပ်မှုတည်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ သူဟာ ဘုရင်တစ်ပါးလိုဖြစ်ပေမဲ့ သူနေထိုင်စားသောက်မှုနဲ့ အခြားအကျင့်အမှုတွေဟာ မပြောင်းလဲခဲ့ဘူး။ Stanley Lane Poole က “အရေးဗီးယားရဲ့ အုပ်ချုပ်ရှင်ဖြစ်ခဲ့သည့်တိုင် သဲကန္တာရ၏ အစားအသောက်ဟာ သူ့အဖို့ အကြိုက်တူဖြစ်ခဲံ့ပုံရတယ်” လို့ဆိုခဲ့တယ်။ (The Speechess and Table talk of the Prophet Mohammad page-30)
(၄) မုဟမ္မဒ်ဟာ အချိန်မကျဘဲ သေလွန်ခဲခြင်းမဟုတ်သလို တစ်ဦးတစ်ယောက်သတ်လို့ သေခဲ့ခြင်းလည်း မဟုတ်ဘူး။
(၅) မုဟမ္မဒ်ဟာ သူရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို သူ့ရဲ့လက်နဲပ သူကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ Stanley Lane Poole က “မုဟမ္မဒ်ဟာ သူ့အ၀တ်တွေကို သူကိုယ်တိုင်ဖာထေးချုပ်လုပ်တယ်။ ဆိတ်နို့ကို ညှစ်ပြီး ၊ ကိုယ်တိုင် ဆိတ်တွေကို စောင့်ကြည့်တယ်။ ” လို့ ရေးခဲ့တယ်။ (The Speeches and Table talk of the Prophet Mohammad, Page-29)
(၆) မုဟမ္မဒ်ဟာ သူ့ဘ၀ကို ဘာသာတရားဟောပြောရင်း ကုန်စေခဲ့တယ်။ “သမိုင်းရဲ့ ရှုထောင့်တစ်ခုလုံးမှာ သူ့ဘ၀နဲ့ မပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာ မရှိခဲ့ဘူး။ “(Mohammad and Mohammadanism, by, Rev. Bosworth Smith, page-99) တကယ်တော့ တရားဟောခြင်းကြောင့် သူဟာ အလွန်ကျော်ကြား ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။
(၇) ကောင်းကင်တမန်များနဲ့ မီးနဲ့ ဖန်ဆင်းခံရတဲ့ ဂျင်(န်)သတ္တ၀ါတို့ဟာ သူတရားကျင့်စဉ်က နားတဲ့အခါ လာရောက်လေ့ရှိတယ်။
(၈) မုဟမ္မဒ်ရဲ့ သတင်းစကားတွေဟာ လွန်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ တမန်တော်တွေရဲ့ သတင်းစကားကို ဆက်လက်သတိပေးခြင်းဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့ပြီးတဲ့ တမန်တော်တွေကို လက်ခံခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ ကိုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ကို နီးကျပ်စွာ လေ့လာခြင်းရဲ့ သာဓကပဲဖြစ်တယ်။
“ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်စူရဟ် ဘက္ကရာ ၁၃၆ မှာ ” အို-မွတ်စလင်မ်အပေါင်းတို့ အသင်တို့သည် ဤသို့ ပြောကြားပါလော့။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အားလည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပို့ချသည့်အရာ (ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်)ကိုလည်းကောင်း၊ နဗီတမန်တော်များဖြစ်ကြသည့် အီဗရာဟီမ်၊ အစ္စမာအီလ်၊ အစ္စဟာက်၊ ယအ်ကူဗ် နှင့် တမန်တော် ယအ်ကူ၏ သားမြေးတို့ထံ ထုတ်ပြန်ပို့ချသည့် တရားဒေသနာများကိုလည်းကောင်း၊ ယုံကြည်ကြပါသည်။ ထို့အပြင်တမန်တော် မူဆာ (ယေရှုခရစ်တော်)၊ နှင့် အီဆာ အားပေးသနားတော်မူခြင်းခံရသော တရားဓမ္မများကိုလည်း ယုံကြည်ကြပါသည်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည် တမန်တော်အပေါင်းထံသို့ ထိုတမန်တော်များကို မွေးမြူဖန်ဆင်းရှင်ထံမှ ပေးသနားခြင်းခံရသော ဒေသနာတော်များကို ယုံကြည်ပြီး ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုတမန်တော်များ ထဲမှ တစ်ပါးကိုမျှ ခွဲခြားခြင်းမရှိပါ။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုအရှင်မြတ်ကို နာခံသူများသာ ဖြစ်ကြပါသည်။
(၉) မုဟမ္မဒ်ဟာ သူရဲ့နောက်လိုက်တွေကို မိစ္ဆာမကောင်းဆိုးဝါးတို့ရဲ့ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲမှုက သတိပေးခဲ့တယ်။ (စူရသွလ်ဟဂ်ျ-၄)မှာ မိန့်ဆိုထားတာကတော့။ “မည်သူမဆို ယင်းရှိုင်သွာန်မိစ္ဆာကောင်အား အဆွေခင်ပွန်းပြုလုပ်ခဲ့မူ၊ ရှိုင်သွာန်မိစ္ဆာကောင်သည် ထိုသူအား လမ်းမှားပျက်စီစေခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ ထိုသူအား အလျှံပြောင်ပြောင် တောက်လောက်သော ငရဲအပြစ်ဒဏ်သို့လည်းကောင်း၊ ဧကန်မလဲ လမ်း
(၁၀) မုဟမ္မဒ်ရဲ့ နောက်လိုက်တွေဟာ သူတို့ကို ပြသခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်ကနေ ဘယ်တော့မှ မသွေဖည်ဆန်ခဲ့ဘူး။ သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ သွန်သင် ဆုံးမခံရခြင်းနှင့် မိတ်ဆွေအဖြစ် ကတိဝန်ခံမှုကို စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်စွာနဲ့ ဆွဲ ကိုင်ထားကြတယ်။ သူတို့ဟာ သည်းမခံနိုင်လောက်တဲ့ အခြေအနေမျိုးနဲ့ ရင်ဆိုင်ရခြင်းနဲ့၊ ကံဆိုးမိုးမှောင် ကျချိန်နေမှာတောင် သူရဲ့ အဖော်ပြုမှုကို လက်မလွတ်ခဲ့ကြဘူး။ (Mohammad and Mohammadism, by-Rev Bosworth Smith, page-110-111)
(၁၁) မုဟမ္မဒ်သည် ဗုဒ္ဓကဲ့သို့ ပေါ်ထွန်းလာတဲ့အခါ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ အခြားဘယ်ဗုဒ္ဓမှ ပေါ်ထွန်းမှာမဟုတ်ဘူး သူဗုဒ္ဓဖြစ်လာတဲ့အခါ လူမှုရေးနဲ့ဘာသာရေးအခြေအနေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ စက်ဆုတ်ရွံရှာဖွယ်ရာဖြစ်နေပေမယ်။ (ဤအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး Kalki Avtar and Mohammad ဖော်ပြချက်မှာကြည့်ပါ။)
(၁၂) မုဟမ္မဒ်အဖို့ ဒီကမ္ဘာမြေမှာ ခေါ်စရာ ဆရာသမားတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မရှိဘူး၊ သူဟာ စာဖတ်တတ်ခြင်းရေးတတ်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့် သူဟာ စာပေမတတ်ကျွမ်းတဲ့ တမန်တော်လို့ကျော်ကြားခဲ့တယ်။ သူ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့ ပို့ချချက်တွေကို ကုရ်အာန်ကျမ်းလို့ သိကြတယ်။ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် စူရဟ် ရှို့ရာ ၁၉၂- ၁၉၄ မှာ မိန့်ဆိုထားတာက “မုချဧကန် ဤ(ကျမ်းဂန်)သည် စကြ၀ဋ္ဌာခပ်သိမ်းတို့ကို ဖန်ဆင်းမွေးမြူရှင်ထံတော်မှ ချပေးတော်မူခြင်းဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်တမန်(ဂျစ်ဗရာအီလ်)သည် ယင်းကျမ်းဂန်ကို သယ်ဆောင်ချပေးခဲ့လေသည်။ အသင်၏ စိတ်နှလုံးပေါ်၌ အသင်သတိပေးနှိုးဆော်သူတို့တွင် အပါအ၀င်ဖြစ်အံ့သောငှာ ” လို့ မိန့်ဆိုထားတယ်။
(၁၃) ဗုဒ္ဓတိုင်းမှာ ဗောဓိညောင်ပင်တစ်ပင်ရှိခဲ့တယ်။ တစ်ချို့ဗုဒ္ဓရဲ့ ဗောဓိညောင်ပင်ဟာ (Peepul tree) ပင်ဖြစ်တယ်။ တချို့ကျသော ညောင်သဖန်းပင်ဖြစ်ပြီး ၊ တချို့ကတော့ (Gonor tree) ပင်ဖြစ်တယ်။ တစ်ချို့ခေတ်သစ် ဗုဒ္ဓဘာသာစာပေပညာရှင်တို့ရဲ့ အဆိုအရ အရိမေတ္တေယျ ဗုဒ္ဓရဲ့ ညောင်ပင်ဟာ သစ်မာ (Iromwood)ပင်ဖြစ်တယ်။ (M0hammad in Buddhist Scriptures, page-64) တမန်တော် မုဟမ္မဒ်ရဲ့ ဗောဓိညောင်ပင်ကတော့ ဟူဒိုင်ဗီယဟ်ဆိုတဲ့နေရာဖြစ်ပြီး၊ အဲဒီနေရာက သစ်ပင်တွေဟာ မာကြောပြီးလေးပင် လှတယ်။ သူဟာ အဲဒီသစ်ပင်အောက်မှာ အစည်းအဝေးတစ်ရပ်ကို ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။
တမန်တော် မုဟမ္မဒ် ဟာ လိုအပ်တဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ့ ၀ိဝေသလက္ခဏာတွေနဲ့ ကိုက်ညီနေတာ ရှင်းနေပြီဖြစ်တယ်။ ယခုတဖန် ကျွန်ုပ်တို့ကာ အရိမေတ္တေယျဗုဒ္ဓနဲ့ တမန်တော် မုဟမ္မဒ်တို့ရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာ တွေတူညီသလား ဆိုတာ ကို စမ်းစစ်ကြည့်ကြစို့။
(၁) အရိမေတ္တေယျဆိုတာ “အလွန်သနားကြင်နာခြင်း”လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ စာရေးဆရာတစ်ဦးက ၁၉၃၀ ခုနှစ်အောက် တိုဘာလ ၁၆ ရက်နေမှာ ထုတ်ဝေတဲ့ “The Leader”ဆိုတဲ့ သတင်းစာရဲ့ စာမျက်နှာ ၇ ကော်လံ-၃ မှာရေးထားတာဖြစ်တယ်။ မုဟမ္မဒ်ဟာလည်း အလွန်သနားကြင်နာတတ်သူဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်မှာ သူ့ရဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တစ်ခုဟာ “ကမ္ဘာခပ်သိမ်းအဖို့ ကရုဏာတော်ရှင်” (၂၁း၁၇)မှာ ဆိုထားခြင်းဖြစ်တယ်။
(၂) မုဟမ္မဒ်ဟာ နဗ္ဗာန်ဘုံမှာ ဘုရားသခင်ရဲ့ ပလ္လင်တော် လက်ျာဖက်မှာ သစ်ပင်းကြီးတစ်ပင်ကို တွေ့ခဲ့တယ်။ အဲဒီအပင်ဟာ ကျယ်ပြန်လှတဲ့ ဧရိယာကြီးကို ဖုံးအုပ်နေတယ်။ “မြင်းကုန်နှီးပေါ်မှာ ထိုင်စီတဲ့ တစ်ဦးဟာ အဲဒီ သစ်ပင်ရဲ့ အရိပ်ကို နှစ်ပေါင်းတရာနဲ့တောင် ဖြတ်မကျော်နိုင်ဘူး။ ” လို့ အဆိုရှိတယ်။ (Mohammad in Buddhist Scriptures, page,79)
(၃) မုဟမ္မဒ်ဟာ အဲဒီသစ်ပင်ကို မျက်တောင်တစ်ချက်မမှိတ်ဘဲ စိုက်ကြည့်ခဲ့တယ်။ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်စူရဟ်နဂျမ်-၁၇)မှာ မိန့်ဆိုထားတာကတော့ “မျက်စိသည် သွေချော်ခဲ့သည်လည်း မရှိချေ။ ကျော်လွန်သွားခဲ့သည်လည်း မရှိချေ။ ” လို့ မိန့်ဆိုထားတယ်။
(၄) အရိမေတ္တေယျ ဗုဒ္ဓဟာ သူ့လည်ပင်းကို လှဲ့ရာမှ သူ့တစ်ကိုယ်လုံးကို လှဲ့နိုင်တယ်လို့ အဆိုရှိခဲ့တယ်။ “Sir. William Muir က မုဟမ္မဒ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ” အကယ်၍ သူဟာ သူရဲ့မိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုလှည့်ပြီး စကားပြောမည်ဆိုလျှင် သူဟာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမလှည့်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတစ်မျက်နှာလုံးနဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးကို လှည့်တယ်။ ” (The Life of Mohammad, page-511-512) ဗုဒ္ဓစာပေမှာ ကြိုတင်ဟောကြားထားတဲ့ အရိမေတ္တေယျ ဗုဒ္ဓဟာ မုဟမ္မဒ်အပြင် တခြားသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတာ ရှင်းနေပါတယ်။
ဒါဟာ 30- 12-2007 နေ့ အစ္စလမ်ဓမ္မဗိမာန်ဟောပြောချက် (မွတ်စလင်များအတွက် (ကန့်သက်) သီးသန့်ထုတ်ဝေတဲ့ သမိုင်းကျမ်းဂန်များမှ တမန်တော်မုဟမ္ဒ်(ဆွ) စာအုပ်ထဲက သူ့တို့ရဲ့ရေးသားချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ရေးသားသူက အွမ္မရ်ခင်ညွှန့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓသည် မြင့်မြတ်ပြီး ကြွယ်ဝသည့် မျိုးနွယ်စုမှ ပေါက်ဖွားလာခြင်း။
ကဲ နှုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်။ မိုဟမ္မဒ်က ဘုရားဖူးတွေကို Banu Hashin အမည်ရှိတဲ့ မျိုးနွယ်စုကနေ အေဒီ 571ခု၊ ဧပြီလ(၂၂)ရက်မှာမွေးဖွားလာတယ်။ (ရှင်းနေပြီးနော်.. ဗုဒ္ဓက မြင့်မြတ် တဲ့မျိုးနွယ်ကနေမွေးဖွားတာ မိုဟမ္မဒ်က ဘုရားဖူးတွေကို ရေရောင်းစား တဲ့ ဘုရားကျွန်မျိုးနွယ်စုကနေမွေးဖွားလာတာ)ဘာမှမဆိုင်ဘူး။)
ဗုဒ္ဓ၏ အဓိက၀ိသေသထူးမှာ ၎င်း၌ ဆရာသမားမရှိခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။ (Beal, Romantic History of Buddha . page 241)
ဗုဒ္ဓဟာ ကိုယ်ဘာသာကိုယ်ကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးမှ ဘုရားအဖြစ်ကို ရောက်ရှိလာတဲ့ အတွက် ဆရာဆိုတာ လုံးဝမရှိဘူး။ မိုဟမ္မဒ် က ဟီရာ တောင်ကုန်းမှာ တရားထိုင်နေတုန်း ကောင်းကင်ကျမ်းချက် (အလ္လာဟ်ရဲ့ ပို့ချချက်တွေကိုရခဲ့တယ်။ ) ဘယ်သူက တစ်ဆင့်ရသလဲဆိုတာကို စဉ်းစားကြည့်ပါ ကောင်းကင်တမန်(ဂျစ်ဗရာအီလ်)ဆီက နေရခဲ့တာပါ။ ဒါဆို ဂျစ်ဗရာအီလ် ဟာ မိုဟမ္မဒ်ရဲ့ ဆရာပေါ့။ ငြင်းလို့ မရပါဘူး။ မိုဟမ္မဒ်ကိုယ်တိုင် ကျင့်ကြံလို့ မဟာဥာဏ်တော်ကြီးရပြီး သိခဲ့တာမဟုတ်ဘူး ။ ကောင်ကင်တမန် ဂျစ်ဗရာအီလ် ဆီက ရတာ။ ရှင်းပါတယ်။ ဂျစ်ဗရာအီလ် က စာမတတ်ပေမတတ်မိုဟမ္မဒ်ရဲ့ ဆရာ။
ဒီထပ်လွဲတာတွေကို ထပ်မပြောချင်တော့ပါဘူး။ ဒီနှစ်ချက်နဲ့ တင်တော်တော် လွဲနေပါပြီ။ ကဲ ဒီစာကို ဖတ်မိတဲ့ သူအားလုံးတို့ကလည်း သဘောပေါက်မှာပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာက အမွန်အမြတ်ဆုံးဖြစ်လာတဲ့အခါ အခြားဘာသာဝင်တွေဟာ ဗုဒ္ဓကို ဘန်ပြ သူတို့ဘာသာဝင် မသိနားမလည်သူတို့ကို စွဲဆောင်နေကြပါပြီ။ ကိုယ်ပိုင်အတွေအခေါ် ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားကြည့်ကြပါဦး။ နောက်ကြုံရင် အကျယ်တ၀န့် ထပ်ဖော်ပြပါဦးမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
← မသေမချင်း မှတ်ထားစေချင်တယ်
မုဒိန်းကောင်မိုဟမ္မဒ်သည် အရိမေတ္တယျဘုရားရှင် မဟုတ်သော သက်သေ။ →